Dawladda Kuuba iyo shirkadda Google oo heshiiyay - BBC Somali
Dawladda Kuuba iyo shirkadda Google oo heshiiyay
Image caption Dadka Cuba intooda badan internet-ka waxay ka helaan wi-fi-yada goobaha dadwaynaha lagu xiro
Shirkadda isgaarsiinta dawladda Kuuba ee Etecsa ayaa heshiis la gashay shirkadda Google, kaas oo saamixi doona in si dhakhso ah loo helo adeegyada ay bixiso shirkaddaasi Maraykanka laga leeyahay.
Heshiiskaas waxaa ka mid ah in shirkadda dhanka tiknoolajiyadda ee Google ay qalab gaysato Cuba si ay sare ugu qaado xawaaraha adeegyada ay bixiso kuwaas oo ay ka mid yihiin Youtube iyo Gmail.
Google iyo Etecsa ayaa gaaray heshiiskooda todobaadyadii u dambeeyay ee xilka madaxwayne Barack Obama.
Mana cadda in madaxwaynaha badalaya uu wax ka badali doono siyaasadda Maraykanka ee Kuuba ku aadan.
Madaxwayne Obama ayaa horaantii sanadkan soo celiyay xiriirkii uu Maraykanku la lahaa Kuuba in kabadan 50 sano oo ay cadaawad dhex taallay labadaasi dal.
Trump ayaa dood ka keenay tan iyo markii la doortay bishii hore.calaaqaadkaas hagaagay ee Maraykanku la yeeshay dalkaas Shuuciga ah.
Image caption Eric Schmidt oo Google ka socda ayaa heshiiskan ku saxiixay magaalada Havana
Laakiin weriyaha BBC, Will Grant oo ku sugan magaalada Havana ee dalka Kuuba waxa uu sheegayaa in ay wali jirto hubaanti la'aan ku aadan go'aanka kama dambaysta ah ee uu Trump ka qaadan doono jasiiraddaas.
Inkastoo ay u badan tahay in dadka Kuuba intooda badan ay u arkaan heshiista Google tallaabo horay loo qaaday haddana waxaa iska yar isbadalka ay arrintaasi ku keeni karto guud ahaan helida adeegga internet-ka.
Kuuba ayaa wali ka mid ah dalalka ugu adeeg internet yar adduunka oo dhan.
Trump oo ku hanjabay burrinta heshiis Obama ka shaqeeyey.
Maqal Galaal oo sharaxaya shir uu Fidel Castro u qabtay Itoobiya iyo Soomaaliya